mubvunzo Hi All
1 gore 1 mwedzi wapfuura #1006 by cunnah37
Hi ini ndiri Chris kubva kuBlackpool, ndave ndiri kumhanya simming kwemakore akawanda. Kutanga ne fs98 uye zvakapfuurira kuburikidza nezvose zvinoitika kubvira. Ichangobva kuchinjwa kuFSX patinowana PC itsva yakakwanisa kuiita zvakanaka. Iva nehanzvadzi huru pfupi nokuti ini handina nguva yezvakare. Wakawana nzvimbo ino tichitsvaga mavhisi ye ndege isina chaipo uye sekusununguka kwekushandisa ikozvino pane zvandinoda mazita.